लोकसेवाका अध्यक्ष भन्छन्– संक्रमितलाई परीक्षामा राख्न सक्दैनौं, तर उपाय छ ! – Sky News Nepal
२८ आश्विन २०७७, बुधबार १२:१५ मा प्रकाशित
लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितहरू सहभागी हुन नपाउने भएका छन् । आयोगले संक्रमितहरू परीक्षामा बस्न नपाउने मापदण्ड तयार पारेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । आयोगको यो मापदण्डले संक्रमितमाथि अन्याय भएको कतिपयको टिप्पणी छ । संक्रमितहरूको मानवअधिकारप्रति संवेदनशील नभएको आरोप पनि आयोगमाथि लागेको छ । संक्रमितले परीक्षा दिन नपाउने मापदण्डले उनीहरुको मानव अधिकार हनन भएन र रु यस्तो प्रश्न राख्दा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले रोचक जवाफ दिए । कात्तिक १८ देखि लोकसेवाको परीक्षा हुने भएकाले अहिले नै संक्रमित भएकाहरुलाई आत्मबल दह्रो बनाएर चाँडो निको हुन मैनालीले सुझाए । जसलाई संक्रमणै भएको छैन, तपाईंहरू कमसेकम हाम्रै लागि भए पनि कोरोनाबाट जोगिनुस्’ आयोगका अध्यक्षले भने, ‘कोरोनाका कारणले तपाईंको परीक्षा छुट्दा उमेश मैनाली खुशी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
पहिलो कुरा, कुनै पनि विद्यालयले संक्रमितलाई राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनेपछि भवन दिन मान्दोरहेनछ । आज पनि सेनाका अधिकारीहरूसँग कुरा भयो । तर, परीक्षा हल उपलब्ध हुने सम्भावना देखिनँ । परीक्षामा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी खट्नुपर्ने हुन्छ । पीपीई नै लगाए पनि म जान्न भन्यो भने हामीले जबरजस्ती पठाउन सकिँदैन । जसरी पनि जानुपर्छ भन्दा परीक्षार्थीको जस्तै कर्मचारीको पनि मानवअधिकारको प्रश्न आउला । उत्तरपुस्तिकाबाट पनि कोरोना सर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसलाई निश्चित समयसम्म आइसोलेट गरेर राख्दा फेरि गोप्यताको प्रश्न आउन सक्छ । त्यसकारण, यो आयोगको रहर नभई बाध्यता हो भनेर बुझिदिनुपर्‍यो ।
कोरोना कहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन । यो अनन्तकालसम्म पनि जान सक्छ । त्यसकारण, कोरोना नसकिँदासम्म स्थगन गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । फेरि, केही परीक्षार्थीलाई हेरेर स्थगन गर्दा त्योभन्दा ठूलो संख्या परीक्षा दिने अधिकारबाट बञ्चित हुन्छन् । यो वर्ष अन्तिमपटक परीक्षा दिँदै रहेछन् भने त उनीहरूको उमेर जान्छ । त्यसकारण, यसलाई एउटै कोणबाट मात्रै हेर्दा अपूरो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
मानौं, हामीले कोरोना संक्रमितलाई पुनः परीक्षाको व्यवस्था गर्‍यौं रे । आवेदन दिने १०० प्रतिशतले परीक्षा दिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छ ? छैन । किनभने, परीक्षा छुट्ने कारण कोरोना मात्रै छैन । अरु रोग, दुर्घटना आदिका कारण पनि परीक्षा छुट्न सक्छ । उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्ने ? त्यसकारण, कोरोना लाग्नेको मात्रै मानवअधिकार हुन्छ भन्ने हिसाबले लिइदिनुभएन । दोहोर्‍याएर भन्छु– विकल्प नभएपछि हामी यो मापदण्डमा जान बाध्य भएका हौं ।
पहिलो कुरा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको प्रोटोकलअनुसार संक्रमित व्यक्ति सार्वजनिक स्थानमा जानै पाउँदैन । मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि कडा कानूनी कारवाही हुन्छ भनिसक्नुभएको छ । संक्रामक रोगसम्बन्धी ऐनअनुसार पनि अरुलाई सर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै बाहिर निस्कनु भन्न मिल्दैन । अब म तपाईंलाई व्यवहारिक उदाहरण दिन्छु –
लोकसेवाले लिने परीक्षा १८ कात्तिकबाट सुरु हुँदैछ । संक्रमितहरू दुई हप्तामा निको भइसक्ने भएको हुनाले त्यतिबेलासम्म उहाँहरूमा संक्रमण रहँदैन । गम्भीर संक्रमण छ भने दुई हप्तामा निको हुँदैन भन्ने म पनि मान्छु । तर, गम्भीर बिरामी छ भने परीक्षा दिन सक्ने अवस्थै रहँदैन होइन र ? तर, परीक्षाको मुखमा संक्रमित भएकालाई के गर्ने त ? यो महामारीबाट परीक्षा दिने / नदिने सबै जोगिनु अति आवश्यक छ । त्यसमा पनि केही हप्ताभित्रै परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्‍यो । लोकसेवा आयोगको चाहना के हो भने जो–जो अहिले संक्रमित भइसक्नुभएको छ, आत्मबल दह्रो बनाएर तयारी गर्नुस्, परीक्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै निको भइसक्नु हुन्छ । जसलाई संक्रमणै भएको छैन, तपाईंहरू कमसेकम हाम्रै लागि भए पनि कोरोनाबाट जोगिनुस् । कोरोनाको कारणले तपाईंको परीक्षा छुट्दा उमेश मैनाली खुशी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । (अनलाइन खबर)